आकासमै ‘मेरो ड्युटी सकियो’ भन्दै रुकुम लैजानुपर्ने जहाज नेपालगन्जमै अवतरण गराउने ‘सन्काहा’ पाइलटलाई के भयो कारवाही ? » बुद्ध भूमि नेपाल
भारत र न्यूजिल्याण्डको टेष्ट आज, यस्तो हुनसक्छ प्लेइङ–११
भारत र न्यूजिल्याण्डको टेष्ट भोलिदेखि, यस्तो छ सम्भावित–११
मोटरसाइकलमा हिंडिरहेका यी दुई जनालाई शंका लागेर झोला हेर्दा तिन छक्क पर्‍यो प्रहरी !
बीबीएल खेल्न सन्दीप अष्ट्रेलिया तिर, यस्तो छ उनको तीन वर्षे प्रदर्शन
यिनै हुन् गोरखाका विद्यार्थी नेता जसले स्कुटर दुर्घटना हुदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो
टी–२० वरियता : बाबर शीर्ष स्थानमै, विराटको वरियतामा ठूलो गिरावट
एम्बुलेन्समा यस्तो समान भेटिएपछि गाउलेहरु परे तिन छक्क !
कपिलले शो मा केन्द्रीय मन्त्रीलाई यस्तो गरेपछि भयो बबाल, गार्ड भागे मन्त्री रिसाएर कार्यक्रमनै नगरी फर्किइन्
आकासमै ‘मेरो ड्युटी सकियो’ भन्दै रुकुम लैजानुपर्ने जहाज नेपालगन्जमै अवतरण गराउने ‘सन्काहा’ पाइलटलाई के भयो कारवाही ?
काठमाडौं । रुकुम लैजानुपर्ने जहाजलाई आकासमै उड्दा मेरो ड्युटी सकियो भनेर नेपालगन्ज विमानस्थलमा अवतरण गराउने सन्काहा पाइलटलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले त्यस विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको बताएका छन् । ‘मैले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मार्फत पाइलट पेम्बा शेर्पालाई स्पष्टीकरण सोधेको छु मन्त्री आलेले भने ।
के भएको थियो नेपाल वायुसेवा निगममा ?
नेपाल एयरलाइन्सको एक जना पाइलटको सनकले यात्रुले अनाहकमा दुख पाएका छन् भने वायुसेवा निगमलाई पनि खर्च बढेको छ । काठमाडौवाट रुकुमका लागि उडाएको एउटा जहाजका पाइलटले आफ्नो ड्यूटी आवर सकिएको भन्दै रुकुम अवतरण गर्नुपर्ने जहाज नेपालगञ्ज अवतरण गरिदिएका छन् ।
पाइलटले यस्तो गरेपछि काठमाडौवाट रुकुम पुग्नुपर्ने यात्रु नेपालगन्जमा अलपत्र परेका छन् । यो घटना सोमबारको भएपनि मंगलवार मात्र खबर सार्वजनिक भएको छ । सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको ट्विन अटर विमानलाई तीन बजे रुकुमका लागि उडेको थियो । जहाजमा ८ जना यात्रु थिए । जहाजको ककपिटमा पाइलट पेम्बा शेर्पा बसेका थिए ।
जहाज तोकिएको समयमै काठमाडौं एयरपोर्टबाट रुकुमका लागि उड्यो । जहाज रुकुम त उड्यो तर गन्तव्यमा भने पुर्‍याइएन । यात्रुलाई अलपत्र पारेर नेपालगन्जमै अवतरण गराइयो । कति छिटो जहाज रुकुम अवतरण भयो भनेर जहाजवाट झरेका यात्रु भने नेपालगन्ज विमानस्थल देखेर छक्क परेका थिए ।
पाइलट शेर्पाको ड्युटी आवर सकिएको भन्दै जहाज रुकुम नलगेर नेपालगन्जमै अवतरण गराएका थिए । पाइलट शेर्पाले आफ्नो ड्यूटी ४ बजे सकिने र करिब त्यही समयमा जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थल माथि पुगेकाले आफ्नो ड्यूटी सकिएको भन्दै नेपालगञ्जमै अवतरण गरिदिएका हुन् । उनको ड्युटी विहान ५.३० वजे देखि दिउसो ४ वजे सम्म थियो ।
काठमाडौवाट उडेको जहाज दिउसो ४ वज्दा नेपालगन्ज विमानस्थल माथि पुगेको थियो । उनले आफ्नो ड्युटी आवर सकियो भन्दै रुकुम नपुगी नेपालगन्ज विमास्थलमै जहाज अवतरण गराएका थिए । त्यसवारे नेपालगन्ज विमानस्थललाई पनि जानकारी थिएन भने यात्रुलाई पनि केही बताइएको थिएन ।
पाइलटका सनकका कारण रुकुम उडेका यात्रुले सास्ती पाए भने यात्रुलाई होेटेलमा राख्नुपर्दा निगमलाई आर्थिक नोक्सानी समेत भएको छ । निगमका अनुसार नेपालगञ्ज अड्किएका यात्रुलाई मंगलबार विहान रुकुम पुर्‍याइएको छ । इताजाखबर बाट
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०८:२६
बेहोस अबस्थामा अस्पताल आएका युबकले होस खुलेपछि दिएको बयानले डाक्टरको नै उड्यो होस !
५ मंसिर २०७८, आईतवार १२:११
जब विमानस्थलमा र’क्सी फा’ल्न भनेपछि यात्रुलाई यसरी पिलाइयो भो’ड्का
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार २०:५५
जब एक गायीकालाई स्टेजमा पैसाले बाल्टी भरेर नुहाइयो (भिडियो हेर्नुस्)
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार १५:१६
आज ५ सय ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो ग्रहण लाग्दै, कति बजेदेखि लाग्दैछ ?
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०८:५६
भोलि लाग्दैछ ५८० वर्षपछिको सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण, कतिबेर सम्म रहन्छ ?
२ मंसिर २०७८, बिहीबार १८:००
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०७:५२
८ मंसिर २०७८, बुधबार २१:०७
८ मंसिर २०७८, बुधबार २०:४७
८ मंसिर २०७८, बुधबार २०:३४